Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (နည်းပညာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝေါဟာရ နည်းပညာ အဆိုပြုချက်များ အိုင်ဒီယာ အထွေထွေ
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၏ နည်းပညာ အခန်းသည် ဝီကီပီးဒီးယား အကြောင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်သည်။ ဝီကီဆော့ဖ်ဝဲလ်အမှားများ သတင်းပို့ရန်နှင့် အင်္ဂါရပ်အသစ်များ တောင်းဆိုရန်များကို Phabricator တွင် ပြုလုပ်ပါ ( ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမှားများ သတင်းပို့နည်း ကို ကြည့်ပါ)။
မီဒီယာဝီကီ (MediaWiki) ဆိုင်ရာ အထွေထွေ မေးခွန်းများအတွက် မီဒီယာဝီကီ အကူအညီ စားပွဲ သို့ သွားပါ။
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ) (see also: Wikipedia:FAQ/Technical)
« ဆွေးနွေးချက် အဟောင်းများ၊ ၁, ၂
၁ Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes
၂ Editing News #1—July 2019
၂.၁ Recent releases
၂.၂ New and active projects
၂.၃ Looking ahead
၂.၄ Learning more
၃ အမည်ညွှန်းများ မြန်မာမှုပြုခြင်း
၄ Editing News #2 – Mobile editing and talk pages
၄.၂ Talk pages project
၄.၃ Mobile visual editor
၄.၃.၁ Edit Cards
၄.၅ Looking ahead
၅ Google Code-In will soon take place again! Mentor tasks to help new contributors!
Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes[ပြင်ဆင်ရန်]
Thanks for your attention, Lea Lacroix (WMDE) ၁၃:၀၃၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉ (UTC)
Editing News #1—July 2019[ပြင်ဆင်ရန်]
New and active projects[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈:၃၂၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ (UTC)
_______ — IT0987 (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 00:56, 25 September 2019
မွန်ဝီကီပီးဒီးယားကို ဖန်တီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အတူတူ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားဖက်က အမည်ညွှန်းတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရှိနေဆဲပဲမို့ မြန်မာမှုပြုဖို့ ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမည်ညွှန်းတွေ၊ အထူးစာမျက်နှာတွေကို မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ ဖိုင်ကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို မီဒီယာဝီကီ ဆော့ဖ်ဝဲမှာ ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာခင်မှာ အသက်ဝင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Wikipedia, User, Category စတဲ့ အမည်ညွှန်းတွေဟာ မြန်မာလိုပဲ ဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ ခါတိုင်း Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဆိုတာကနေ ဝီကီပီးဒီးယား:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ဆိုပြီး ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အသိပေးပါရစေ။ အခက်အခဲတွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီမှာတခါတည်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၆:၂၇၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Editing News #2 – Mobile editing and talk pages[ပြင်ဆင်ရန်]
Talk pages project[ပြင်ဆင်ရန်]
Mobile visual editor[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၁:၁၂၊ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
Google Code-In will soon take place again! Mentor tasks to help new contributors![ပြင်ဆင်ရန်]
Hi everybody! Google Code-in (GCI) will soon take place again -aseven week long contest for 13-17 year old students to contribute to free software projects. Tasks should take an experienced contributor about two or three hours and can be of the categories Code, Documentation/Training, Outreach/Research, Quality Assurance, and User Interface/Design. Do you have any Lua, template, gadget/script or similar task that would benefit your wiki? Or maybe some of your tools need better documentation? If so, and you can imagine enjoying mentoring suchatask to helpanew contributor, please check out mw:Google Code-in/2019 and becomeamentor. If you have any questions, feel free to ask at our talk page. Many thanks in advance! --Martin Urbanec ၀၇:၂၈၊ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်_(နည်းပညာ)&oldid=490955" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။